I-manicure yesiFrentshi ekhaya ngezikhonkwane ezimfutshane | IBezzia
Ukukwazi ukwenza eyakho manicure ekhaya kuhlala kungumbono omkhulu. Kungenxa yokuba kuphela ngale ndlela esinokuthi silungise iinzipho zethu nanini na sifuna. Kodwa ukuba ufuna ukwazi indlela yokwenza ifayile Imanicure yesiFrentshi ekhaya ngezikhonkwane ezimfutshane, emva koko kuya kufuneka ulandele amanyathelo ambalwa alula.
Uya kubona ukuba ngesakhono esincinci unokuhlala ufumana yonke into oyifunayo. Okokuqala, kuya kufuneka uyenze Ukukhethwa kwezinto ezifanelekileyo okanye iimveliso kwaye ukusuka apho, ungaqala ngomsebenzi wakho oya kuba ngowona mnandi kwaye ukhawuleze. Ngaba siya kuhla kuyo?
1 Coca iinzipho zakho kakuhle ngaphambi kokuba uqale
2 Sika iinzipho zakho kakuhle kwaye usebenzise ifayile
3 Soloko unakekela ii-cuticles zakho
4 Isiseko sokukhusela ekwenzeni i-manicure yesiFrentshi ekhaya ngezikhonkwane ezimfutshane
5 I-enamel yesiseko
6 Izikhokelo ezintle zokwenza manicure
Coca iinzipho zakho kakuhle ngaphambi kokuba uqale
Ukucoca kuhlala kulilinye lamanyathelo ekufuneka siwathathele ingqalelo ngaphambi kokuqala nawuphi na umsebenzi wobuhle. Ke ngoko, iinzipho zazingazukushiyeka ngasemva. Ukuba unayo nayiphi na i-enamel eseleyo, sele uyazi ukuba kungcono ukubasusa ngesikhonkwane se-nail kwaye ukuba akunjalo, ungasoloko usebenzisa ijusi encinci yelamuni ukuze ukwazi ukushiya ngasemva amabala athile. Khumbula ukuba ukuthanjiswa kwezandla ngamathontsi ambalwa eoyile kuya kuphelisa zonke iintlobo zokoma kwaye umphumo uya kuba ngcono.
Sika iinzipho zakho kakuhle kwaye usebenzise ifayile
Ukuze wenze i-manicure yesiFrentshi ekhaya ngezikhonkwane ezimfutshane, kufuneka sizinciphise. Ngenxa yokuba ukugqitywa kuya kuba kuhle njengakwizikhonkwane ezinde kwaye ngokuqinisekileyo baya kukunika isiphumo esilula onokuthi usinxibe yonke imihla, ngaphandle kokuba ubaluleke. Ke, ungazishiya zombini iimilimitha ezimbalwa zesikhonkwane kwaye undinike imilo oyifunayo nefayile. Unokukhetha isikwere okanye ukugqibezela ngokujikeleza, ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho. Khumbula ukuba indlela yokuzifaka zihlala zingcono ngaphakathi nangaphandle.
Soloko unakekela ii-cuticles zakho
Oko kokuwasika kusemva kwethu, kuba sinokwenza inyathelo elilula ngakumbi kwaye ngentonga yomthi weorenji okanye isixhobo esikhethekileyo salo mmandla, esiya kuba sisisusi se cuticle. Khumbula ukuba ngaphambi kokuthatha isigqibo, eyona ilungileyo yile yinyibilikise kancinci kwaye ungayenza nethontsi leoyile ye-olive. Oku kuyayithambisa indawo kwaye kwenze kube lula ukusebenza nayo. Sityhala sibuyele kancinci kwaye umphumo uya kuba njengoko unqwenela.
Isiseko sokukhusela ekwenzeni i-manicure yesiFrentshi ekhaya ngezikhonkwane ezimfutshane
Nje ukuba izikhonkwane zilungisiwe, lixesha lokuba sizikhusele ngaphambi kokuba ipholishe. Yiyo loo nto kufuneka sisoloko sikhusela. Ngayo siya kuyikhathalela isikhonkwane, siya kuyinika i-hydration eyimfuneko kwaye kwangaxeshanye yenza imibala yee-enamel zekamva ibonakale iphuculwe. nakaninzi. Lelinye lamanyathelo abalulekileyo, kuba ngaloo ndlela siya kubathintela bangaguquki. Nangona ukhumbula ukuba ungenzi uyilo rhoqo, kodwa kufuneka uvumele iinzipho ziphefumle iintsuku ezimbalwa.
Emva kokukhusela iinzipho zethu, akukho nto ifana nokufaka idyasi yokuqala yesiseko. Kule meko, unokukhetha ungqimba lwe-enamel olungafihliyo okanye enye enepinki ekhanyayo okanye ogqibe ze. Oku kuyayinika umbala omncinci oya kuthi ubalaselise i-manicure uqobo. Xa umaleko wokuqala womile, ungawunika owesibini ukuze ekugqibeleni i-manicure yethu ibe nokumelana ngakumbi.
Izikhokelo ezintle zokwenza manicure
Xa ubude besikhonkwane bubonakala ngaphezulu, kuyinyani ukuba sinokukhetha ukusebenzisa i-enamel ngqo ngebrashi. Ewe kunjalo, ukuba nje unesakhono okanye uqhelisela. Kodwa ukuba ukhetha ukuyidlala ngokukhuselekileyo, akukho nto injengokubheja kwezinye izikhokelo okanye izitikha zalo msebenzi. Babhityile ngokwenene ukuze babenokubongwa kodwa kancinane kuphela. Kuya kubakho esona siseko sihle kakhulu manicure yethu. Siza kubeka ngasecaleni, siya kupenda nge-eamel emhlophe kwaye sisuse xa onke amalungu sele omile. Ngoku khanyisa kancinci kwaye ubabonise!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Imanicure yesiFrentshi ekhaya ngezikhonkwane ezimfutshane
Yintoni kombucha? Izibonelelo zesiselo esiqhelekileyo